MEE audio M9B tsy misy tariby finday famerenana | Vaovao IPhone
Ignacio Sala | | Fitaovana IPhone, maro
Ny fanombohana ny maodely iPhone 7 vaovao dia nanamarika ny fiandohan'ny farany ho an'ny fifandraisana an-telefaona amin'ny finday Apple, satria tsy izy no orinasa voalohany nifidy ny hanafoanana ity fifandraisana mahazatra ity izay niaraka taminay nandritra ny 65 taona mahery . Mba tsy dia mafy loatra ny fanovana, Apple dia nanolotra adaptatera jack jiro mba hahafahan'ireo mpampiasa tena tsy sahy manohy mampiasa ny headphones misy fifandraisana jack, raha manomboka mifanakalo ny headphones ho an'ny tsy misy tariby izy ireo.
Amin'izao fotoana izao eny an-tsena isika dia afaka mahita telefaona finday tsy mandeha amin'ny laoniny, maodely mandrakotra ny karazana vidiny rehetra. Lojika ny vola kely tiantsika holaniana, ny kely kokoa ny famaritana ho hitantsika. Androany isika dia handinika ny headphones M9B an'ny MEE audio, headphone izay manome antsika toetra mampifanohitra ny maodelin'ny marika marobe izay hitantsika amin'izao fotoana izao eny an-tsena. amin'ny vidiny tena manintona.
1 Iza ilay audio Mee?
2 Mikropono sy fifehezana mifangaro
3 Volavola an-tsofina
4 Fifandraisana marobe
5 Votoatin'ny boaty
6 M9B Wireless Headphones famaritana
7 Aiza no azoko ividianana azy?
Iza ilay audio Mee?
Na dia toa tsy misy dikany amin'ny mpampiasa maro aza ity orinasa ity dia tsy vahiny amin'ny tontolon'ny mozika izy ireo. Nanomboka ny diany ny Mee Audio tamin'ny 2005 manokan-tena ho amin'ny fampandrosoana ny headphones manolotra famolavolana sy ny kalitaon'ny feo tsara ho an'ny tia mozika. Mee dia mifantoka amin'ny headphones ara-panatanjahantena sy headphone hi-fi ho an'ireo mpitia mozika mitaky be indrindra. Amin'izao fotoana izao ny audio Mee dia manolotra antsika fitaovana marobe tsy misy tariby sy tariby izay mandrakotra ny filàna rehetra mety ilain'ny mpampiasa. Ho fanampin'izay, ny vidin'izy ireo koa dia mifanaraka amin'ny paosy rehetra.
Mikropono sy fifehezana mifangaro
Ny tombony lehibe atolotry ny headphones tsy misy tariby antsika raha oharina amin'ireo nentim-paharazana dia ny fitazonana ny fitaovantsika any am-paosy tsy mila voahodidin'ny tariby, manahirana indrindra rehefa tonga ny sery. Raha toa izy ireo koa mampifangaro tsy ny fahafaha-mihaino mozika ihany fa koa Mampiditra mikrô ihany koa izy ireo hiantsoana sy handraisana antsoearphones dia mahazo isa betsaka, indrindra ho an'ireo mpampiasa izay mahazo antso maro mandritra ny andro.
Ireo mpandahateny manana rafitra fanafoanana ny tabataba dia mazàna manana vidiny avo kokoa noho ny mahazatra ary mandositra ny paosin'ireo mpampiasa maro. Ny kabary M9B dia manasongadina endrika am-bava izay mifanaraka amin'ny haben'ny sofintsika ary manasaraka antsika amin'ny lafiny lavitra amin'ny tabataba manodidina antsika koa izany ary mety hanelingelina ny famoahana mozika amin'ny resaka ataontsika.
Ny iray amin'ireo olana lehibe atrehinay amin'ity karazana headphone ity dia ny mety tsy mifanaraka amin'ny sofintsika. Hamahana ity olana ity, M9B dia misy habe pad 4 hafa manolotra fanao namboarina, endri-pifandraisana amin'ity karazana fitaovana ity.
Mamela antsika ny M9B mampifandray ary ampiasao azy ireo miaraka amin'ny fitaovana roa, mba hahafahantsika mampiasa azy ireo isan'andro amin'ny iPhone sy iPad nefa tsy mila mampifangaro azy ireo tsy tapaka. Ny fifandraisana multipoint dia iray amin'ireo tombony azo raisina raha omena antsika ity maodely manokana momba ny audio Mee ity.
Fampandrenesana tsy misy tariby M9B an-tsofina.
Tariby micro-USB hamenoana finday.
Adaptatera 4 hifanaraka amin'ny sofin'ny mpampiasa araka izay tratra.
M9B Wireless Headphones famaritana
Fanamafisana matetika: 20 Hz ka hatramin'ny 20 kHz
Range: 10 metatra
Famerenana mozika 4 ora.
4,5 ora ny resadresaka.
180 ora amin'ny fitsaharana.
Tiempo de carga: 90 minitra.
Fifandraisana mifehy: micro-USB (tsy tafiditra ao ny charger sy ny tariby).
Fahavitan'ny valin'ny mikrô: 1oo Hz ka hatramin'ny 10 kHz
Fahatsapana: -42dB +/- 3db
Ny halaviran'ny tariby mampifandray eo anelanelan'ny telefaona: 58 cm
Milanja: 16 grama.
Type fit: in-ear
Aiza no azoko ividianana azy?
MEE Audio M9Bs misy amin'ny alàlan'ny Zocotity.es amin'ny vidin'ny 27,99 Euro fotsiny.
Headphones tsy misy tariby MEE audio M9B
Famerenana ny: Ignacio Sala
Fonosana tena tsara
Fanaraha-maso ny volume
Pads 4 samy hafa habe
Tsy misy afa-tsy amin'ny mainty
Fahaleovan-tena 4,5 ora azo hatsaraina
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fitaovana IPhone » MEE audio M9B tsy misy tariby finday famerenana
Hitsahatra tsikelikely amin'ny fifanarahana amin'ny iOS taloha ny WhatsApp